Kwete Kuwana Notifications PaApple Watch? Heino Mhinduro. - Apple Tarisa
Yakanakisa iphone yehupenyu hwebhatiri
iphone 6 skrini isiri kubatidza
zvakachengeteka here kushandisa chando kupisa uchiri nepamuviri
Kwete Kuwana Notifications PaApple Watch? Heino Mhinduro.
Iwe hausi kugamuchira notices pane yako Apple Watch uye iwe hauzive nei. Iwe hausi kunyeverwa paunogamuchira matsva magwaro uye maemail uye zviri kutanga kunetsa. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei usiri kuwana notices pane yako Apple Watch uye kukuratidza maitiro ekugadzirisa dambudziko racho zvakanaka !
Chinyorwa Nezve Apple Kutarisa Notifications
Izvo zvakakosha kuti iwe uzive izvi zvinhu zviviri nezvekutambira zviziviso pane yako Apple Watch:
Nyevero dzezviziviso zvitsva dzinongowoneka paApple Watch yako kana yakavhurwa uye iwe uchipfeka.
Iwe haugone kupihwa chero ziviso kuApple Watch yako kana uchinyatsoshandisa yako iPhone.
Ese maviri manotsi aya anogona kuwanikwa pamusoro peZviviso menyu mune yeWatch app pane yako iPhone uye ndinodisa kubheja chimwe chazvo chingave chikonzero nei usiri kuwana zviziviso pane yako Apple Watch.
zvinorevei kuruboshwe chanza zvinorevei
Bvisa Usakanganise Pane Yako Apple Watch
Kana Usina Kukanganiswa yakavhurwa, yako Apple Watch haizokunyeverise iwe paunogamuchira email, zvinyorwa, kana chimwe chiziviso. Yako Apple Watch icharamba ichigamuchira zviziviso, hazvizongokuzivisa iwe kuti uzive riinhi wagamuchira imwe.
Kuti udzime Usakanganise pane yako Apple Watch, vhura iyo Settings app pane yako Apple Watch uye tinya Usakanganisa . Ita shuwa kuti switch iripedyo neKuti Usakanganise yadzimwa.
Bvisa Wrist Kuonekwa
Sezvandambotaura pakutanga kwechinyorwa chino, yako Apple Watch inongogamuchira chete ziviso kana iwe uchinge wakapfeka. Nekudaro, panogona kunge paine nyaya neiyo sensor kumashure kweApple Watch yako inosarudza kuti uri kana kuti hauna kuipfeka. Kana iyo sensor yakaputsika, yako Apple Watch inogona kutadza kutaura kuti iwe uri kuipfeka, saka haugamuchire notices.
iphone 7 haina kuzivikanwa itunes
Iwe unogona kushanda uchitenderedza wrist sensor nyaya ne kudzima Wrist Detection zvachose. Enda kuWatch app pane yako iPhone uye tap Passcode . Wobva wadzima switch iripedyo nekuonekwa kwechiuno uye simbisa chisarudzo chako nekukanya Dzima kana iko kusimbiswa kuchioneka.
Ongorora: Kana iwe ukadzima Wrist Detection, yako Apple Watch haizongoerekana yakiya uye zvimwe zveYako Activity app zviyero hazvizove zviripo.
Paunenge wagadzirira kugadzirisa yako Apple Watch, ronga musangano paApple Chengetedza pedyo newe. Apple Chivabvu gadzirisa yako Apple Watch mahara kana yakafukidzwa neAppleCare.
iphone 5s haibhadhare kana yaiswa mukati
Kwete Kugamuchira Notices Yeiyo Chaiyo App?
Kana usiri kuwana zviziviso pane yako Apple Watch kubva kune yakasarudzika app, ipapo unogona kunge wakanganisa akadzima zviyeuchidzo zveapp. Enda kuWatch app pane yako iPhone uye tora Notifications.
Paunodonha pasi, iwe uchaona runyorwa rwemaapplication akaiswa pane yako Apple Watch. Tsvaga iyo app iyo iwe yausiri kugamuchira notices kubva uye tora pairi.
Kana iwe uine zvetsika zvigadziriso kumisikidza iyo app, ita shuwa switch iripedyo ne Ratidza Alerts yakavhurwa. Iwe uchaziva Show Show Alerts iripo kana switch padivi payo iri green.
Kana iwe uchiratidzira marongero ekuzivisa pane yako iPhone yeapp, enda kune iyo Zvirongwa app pane yako iPhone uye tinya Notifications .
zvekuita kana iphone yaoma
Tevere, pfuurira pasi kune iyo app iwe yausingagamuchire notices kubva uye tora pairi. Pakupedzisira, ita shuwa switch iripedyo ne Rega Kuzivisa yakavhurwa.
Notifications dziri kushanda paApple Watch yako uye hauzopotsa chero zviyeuchidzo zvakakosha. Iye zvino unozoziva zvekuita nguva inotevera kana usiri kuwana zviziviso pane yako Apple Watch. Kutenda nekuverenga uye unzwe wakasununguka kubvunza chero mimwe mibvunzo yauinayo muchikamu chemashoko pazasi.